Izindlu e- Tamara - I-Airbnb
Izindlu e- Tamara
Bilbo, Euskadi, i-Spain
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Santiago
Ifulethi elihle elisenkabeni yedolobha elidala, elimaphakathi kakhulu futhi elinethezekile ezivakashini. Imizuzu emibili uhamba ngezinyawo ukusuka ku-metro, ithilamu, ibhasi nendawo yokupaka. Kuyifulethi elikahle labantu abangashadile noma imibhangqwana, elinethezekile futhi elinethezekile, okuzokwenza ukuvakasha kwakho eBilbao kube ukuhlala okujabulisayo nokwanelisayo.
Ifulethi elihle elisenkabeni yedolobha elidala, elimaphakathi kakhulu futhi elinethezekile ezivakashini. Imizuzu emibili uhamba ngezinyawo ukusuka ku-metro, ithilamu, ibhasi nendaw…
Hlola ezinye izinketho ezise- Bilbo namaphethelo